Qarax Lala Beegsaday Askar Itoobiyaan Ah. – Bogga Calamada.com
Qarax Lala Beegsaday Askar Itoobiyaan Ah.
Wararka laga helayo gobalka Baay ee dhanka Konfur Galbeed dalka Somalia waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah gobalkaasi qarax culus lagula beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya.
Qaraxan waxa uu sigaar ah kaga dhacay wadada isku xirta degmooyinka Baydhabo iyo Bardaale gaar ahaan agagaarka deegaanka Awdiinle,dhawaaqa qaraxa waxaa si aad ah looga maqlay deegaano ka tirsan gobalka Baay.
Miinada ayaa ka qaraxday Bartamaha Kolanyada Itoobiya taasi oo muujineysa iney jirto khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed ay soo gaartay kolanyada Amxaarada ee qaraxa lala beegsaday.
Kolanyada Itoobiyaanka ah ayaa ku hakaday goobtii qaraxa lagula beegsaday waxeyna hawada ka saareen isgaarsiintii deegaanka Awdiinlle,waxeyan qorshaha kolanyadan Itoobiyaanku ahaa iney Murtad Shariif Sakiin kaga hormaraan degmada Bardaale oo markii dambe Shariif Sakiin lagu geeyay Diyaarad Elecobtar ah.